Barashada Luuqada Ingiriiska | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Sahal Issaakh — June 18, 2016
Luuqada Ingiriiska waa luuqad caalami ah, ayna ku hadlaan wadamo badan oo dunidda dacaladeeda ah. Luuqadani waxay hodan ku tahay xagga ereyada, waxaana la sheegaa in ay maalin kastaa areyo cusub ku soo kordaan.
Haddaba waxaan jeclahay in aan wax ka taabto qaabka ugu fudud ee lagu baran karo luuqada Ingiriiska. Marka koowaad waa in aad la timaadaa niyad waayo waxaad niyid u hayn lagama yaabo in aad barato marka xiga waxaa lagaa doonayaa in aad Ingiriiska ka barato macalin ay wanaagsantahay ku dhawaaqida ereyada Ingiriiska tani aad bay muhiim u tahay waxa ugu adag luuqadani waa fahamka qofka adiga kugula hadlayo ama hadaad cadeecad ka dhageeysaneysid sidii aad ku fahmi lahayd.
Ka soo bilaaw luuqada heerka ugu hooseeya oo ah Alfabeetada, sii waqti ku filan aqriskeeda. Macalinka waxaa uu ardayga baraa boqolkiisa labaatan iyo shan halka ardayga laga doonayo in uu la yimaado boqolkiiba todobaatan iyo shan. Isticmaal afarta qaacido ee lagu barto luuqadaha kuwaasoo kalla ah.
Iyo ku hadal
Waa in aad adiga naftaada kula sheekeysataa luuqada Ingiriiska adigoo isku dayaayo in aad dhisto jumlado badan. Samee xifdis badan waa in aad qani ku ahaataa waxa loo yaqaan vocabulary (Ereyo badan oo cusub). Intaa ka dib waa in aad barataa 12ka qeybbood ee uu ka kooban yahay Garaamarka Ingiriiska kaddibna siddeeda qeybood ee Passive voice ka.
Intaa kadib waa in aad barataa qeybaha hadalka ee loo yaqaan (Parts of Speech) waxayna ka kooban yihiin 7 qeybood oo kala ah,
Noun (Magac), Pronoun (Magac u yaal), Adjectives (Sifa Sheege), Verb (Ficil), Adverbs (Ficil Kaabe) ,Preposition (Meeleeye) , conjunction (Xiriiriye) and interjection (Cajiib galiye).
Markii aad halkaan mareeyso waxa aad u baahan tahay waa in aad sameeyso dadaal badan oo ah xaga aqriska, soo gada qaamuus, kaas oo kaa caawin kara in aad ogaato micnaha ereyo badan. Aqri mar alaale markii aad aragto warqadaha ingiriiska ku qoran, hadii aad la kulanto eray aadan micnihiisa garaneynin waa in aad qaamuuska la aadaa. Mararka qaar isku day in aad kor ugu dhawaaqdo ereyada.
Ugu dambeeyntii waxaad u baahan tahay in aad sameeyso dhageeysi fara badan sidda cadeecadaha iyo talfishoonada BBC World Service, Aljazeera, CNN iyo Peace TV ee Af –Ingiriiska ku baxo.
Next post Ilaalinta Iyo Dhawrista Diinta Islaamka |Tukesomalism.com
Previous post Waa Maxay Cudurka Loo Yaqaan Down Syndrome|TukeSomalism.com
June 29, 2017 at 10:00 am	— Reply
Waa talo fiican wll waxaan rajaynayaa umadda somaliyeed kafaa idaysan doonaan waa mahadsantiin wsc
September 4, 2017 at 8:10 am	— Reply
Waxaan filayaa inay anficidoonto dadka caqliga usaaxiibka ah